मानिसबाट जनावरमा फैलियो कोरोना : कोरोनाबाट १० हजार ओत मरे, लक्षण पनि मानिसमा जस्तै ! - गोकर्णेश्वर खबर
मानिसबाट जनावरमा फैलियो कोरोना : कोरोनाबाट १० हजार ओत मरे, लक्षण पनि मानिसमा जस्तै !
गोकर्णेश्वर खबर२६ आश्विन २०७७, सोमबार १६:२६ मा प्रकाशित (१ हफ्ता अघि) ३२ पाठक संख्या
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको महामारी मानिसबाट अब जनावरमा फैलिन थालेको छ । अमेरिकी वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताले फार्ममा रहेका १० हजार ओत कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको जनाएका छन् । मानिसबाट जनावरमा कोरोना फैलिएको दावी अनुसन्धानकर्ताले गरेका सिएनएनले जनाएको छ । उटाहको फार्ममा रहेका १० हजार ओत हालै मरेका थिए ।
उटाहमा झण्डै ८ हजार ओत मरेका छन् । अर्को एक राज्यको फार्ममा २ हजार ओत मरेका छन् । नरम रौँका लागि ओतलाई व्यवसायिक पालन गरिन्छ । पशु विशेषज्ञ डा.डिन टेलरले भने, ‘ओतमा कोरोना भाइरस अगष्टमा पहिलो पटक देखिएको थियो । जुलाइमा फार्ममा काम गर्नेहरुमा कोरोना संक्रमण भएको थियो । उनीहरुबाटै सरेको अनुमान गरिएको छ ।’
सुरुवाती अनुसन्धानमा मानिसबाट जनावरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको थियो । तर, जनावरबाट मानिसमा फैलिएको अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन । डा. टेलर भन्छन्, ‘उटाहमा हामीले धेरै अनुसन्धान गर्यौँ । यो घटना मानिसबाट जनावरमा फैलिएको देखिन्छ । फेरि जनावरबाट मानिसमा फैलिने वा नफैलिने भन्ने विषयमा हामी अनुसन्धानमै छौँ ।’
दुबै ठाउँका फार्मलाई क्वारेन्टिन गरिएको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन् । यसअघि नेदरल्याण्डस्, स्पेन र डेनमार्कमा पनि यस्तै खालको केस रिपोर्ट गरिएको थियो । अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चरले मानिसबाट जनावरमा कोरोना भएको पुष्टि गरेको छ । सिएनएनका अनुसार कुकुर, बिरालो, सिंह र बाघ जस्ता जनावरमा कोरोना पुष्टि भएपछि यसबारेमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो ।
ओतमा मानिसमा जस्तै लक्षण देखिएको थियो । स्वास लिन समस्या हुने, आँखामा कचेरा लाग्ने, ज्वरो आउने लगायतका लक्षण देखिएको थियो । ओतमा कोरोना भाइरस ह्वात्तै फैलिएको छ । धेरै संक्रमित ओत मरेका छन् । उटाहमा रहेका ९ वटा फार्ममा कोरोना संक्रमण भएको छ ।
यसअघि नेदरल्याण्डस्मा १० हजार वयश्क ओत र ५० हजार ससाना ओतलाई कोरोना फैलाउने आशंकामा मारिएको थियो । त्यहाँ माउमा कोरोना पुष्टि भएपछि सरकारले ६० हजार ओत मार्ने निर्णय लिएको थियो । नेदरल्याण्डस् सरकारले ओतबाट मानिसमा कोरोना संक्रमण भएको दाबी गरेको थियो ।
कोरोना उपचार : अस्पताल भन्छन् ‘आइसियू छैन’, मन्त्रालयको प्रतिक्रिया ‘प्रयोग भएन’